ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်(DSEZ)နှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အကြားဆက်သွယ်သည့် နှစ်လမ်းသွားလမ်းများ သည် ထ စီမံကိန်း နောက်ခံသမိုင်ားးဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းနှင့် စီမံကိန်းနယ်မြေများ၏ တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ GMS ၏ တောင်ပိုင်းစီးပွားရေးစကြံန်ကို ချိတ်ဆက်အထောက်အပံ့ပြုမည့် ASEAN အာဆီယံနိုင်ငံများ ချိတ်ဆက်ရေး အထူးစီမံချက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အရှေ့နှင့် အနောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးများတို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးမည့် အနောက်ဖက်ဂိတ်တခုဖြစ်သည်။ အရှေ့ပိုင်းဒေသစီးပွားရေးစင်္ကြန်(EEC) ဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် ကိုလည်းဆက်သွယ်စေသည်။
နှစ်လမ်းသွားလမ်းမ ဖောက်လုပ်ခြင်းသည် ထားဝယ်စီးပွားရေးဇုန်ကို အထောက်အကူပြုမည့် ကနဦး မရှိမဖြစ် အခြေခံအဆောက်အဦ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းပထမအဆင့်၏ ကနဦးလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်သည်။ လမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ထားဝယ်စက်မှုဇုန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် ကန်ချနဘူရီခရိုင်ရှိ ဖူနမ်းရွန်းမြိူ့အားဆက်သွယ်သည့် နှစ်လမ်းသွား လမ်းမ စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ လမ်းမအရှည်မှာ စုစုပေါင်း ၁၃၈ ကီလိုမီတာ ရှိသည် (သတ်မှတ် ရည်ညွန်းချက် TOR အရ)။ ဤလမ်းမသည် ဘန်ရိုင် - ကန်ချနဘူရီ - ဖူနမ်းရွန်း မြို့ကြီးများအကြား ဆက်သွယ်သွယ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ အထူးအဝေးပြေး လမ်းစီမံကိန်း၏ ကွန်ယက်လမ်မများနှင့် ချိတ်ဆက်မည်။ နှစ်လမ်းသွားလမ်းမစီမံကိန်းနှင့် အထူးအဝေးပြေး လမ်းစီမံကိန်းတို့ ပြီးစီးသွားပါက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏စက်မှုဖုန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လမ်ချဘန် ဆိပ်ကမ်းနှင့် စက်မှုဖုန်တို့အား ဆက်သွယ်ပေးပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိူးတိုးတက်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ များပြားလာခြင်း၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ရေး ယန္တရား တို့ကို တိုးမြင့်စေမည်။
၁. စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အတွက် အစီအစဉ်၊ မူဝါဒပေါ်လစီနှင့် လမ်းညွန်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊
၂. စီမံကိန်း၏ အင်ဂျင်နီယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊
၃. ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုံမှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တို့အာားဆက်သွယ်မည့် နှစ်လမ်းသွားလမ်းအား ဖောက်လုပ်ရန် မူလအသေးစိတ်ဒီဇိုင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဒီဇိုင်း သုံးသပ်မှုတစ်ခုကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်၊
၄. လက်ရှိလမ်းအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမည့် စီမံကိန်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် တင်ဒါခေါ်စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပြန်လည်အကဲခတ်ရန်၊
ထားဝယျမှဘနျကီမှနျးသို့ရထားလမျးဖောကျလုပျရေးစီမံကိနျးသညျထားဝယျရနေကျဆိပျကမျးနှငျ့စကျမှုဇုနျစီမံကိနျးမြားနှငျ့နယျစပျဖွတျကြျောစင်ျကွနျနှငျ့နယျစပျဖွတျကြျောစင်ျကွံဆကျသှယျမှုလမျးကွောငျးသညျအနောကျနှငျ့အရှေ့၏ Gate Way အသဈဖွဈသညျ။ ထားဝယျစီမံကိနျးမြားသညျဒသေတှငျးထောကျပံ့ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ကုနျသှယျရေးစနဈ၏ဗဟိုဖွဈသညျ။ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံမြားနှငျ့တောငျတရုတျပငျလယျရှိအနျဒမနျပငျလယျမှတဈဆငျ့အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာသို့သယျယူပို့ဆောငျရေးနှငျ့ကုနျသှယျမှုကိုဆကျသှယျပေးပွီးကုနျပစ်စညျးမြားပို့ဆောငျရနျအဓိကလမျးကွောငျးဖွဈသညျ။ အရှအေ့လယျပိုငျး၊ ဥရောပနှငျ့အာဖရိကမှတဈဆငျ့ရမှေဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျကုနျကစြရိတျနှငျ့သယျယူပို့ဆောငျရေးအတှကျအခြိနျကိုသကျသာစမေညျဖွဈပွီးရရှေညျတှငျကုနျသှယျရေး၊
ပွနျလညျသုံးသပျသညျ့ပျေါလစီမြားနှငျ့စီမံကိနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့သကျဆိုငျသောဖှံ့ဖွိုးရေးမဟာဗြူဟာမြားကိုတှရှေိ့ရလြှငျ Phu Nam Ron မှထားဝယျသို့ဖှံ့ဖွိုးရေးလမျးကွောငျးသညျတောငျပိုငျးစီးပှားရေးစင်ျကွံနှငျ့မဲခေါငျမွဈဝှမျးရှိ GMS စီးပှားရေးစီးပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမူဘောငျမူဝါဒကိုမွှငျ့တငျလိမျ့မညျ မွနျမာ - ထိုငျး - ကမ်ဘောဒီးယား - ဗီယကျနမျကိုဆကျသှယျသညျ။
ဖှံ့ဖွိုးပွီးကှနျရကျသညျအရှအေ့လယျပိုငျးမှကုနျပစ်စညျးမြားကို ၅ ရကျကွာသယျယူပို့ဆောငျရေးကိုအငျဒိုခြိုငျးနားတှငျ ၅ ရကျအထိလြှော့ခနြိုငျသညျ။ ထိုငျးနိုငျငံအတှကျထားဝယျရနေကျဆိပျကမျးနှငျ့ Laem Chabang ဆိပျကမျးကိုအိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားနှငျ့ဆကျသှယျသညျ့ကုနျသှယျရေးမဟာဗြူဟာအရစီးပှားရေးတံခါးပေါကျအသဈဖွဈလာလိမျ့မညျ။ ထို့ကွောငျ့ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အရှအေ့လယျပိုငျး၊ တောငျအာရှမှကုနျပစ်စညျးမြားသညျထားဝယျရနေကျဆိပျကမျးမှတဈဆငျ့ Laem Chabang ဆိပျကမျးသို့တဈရကျသာကုနျသှားပွီးတရုတျ၊ ကိုရီးယား၊ ဂပြနျနှငျ့ပစိဖိတျနိုငျငံမြားသို့တငျပို့နိုငျသညျ။ ထားဝယျရနေကျဆိပျကမျးစီမံကိနျးနှငျ့ထားဝယျအထူးစီးပှားရေးဇုနျသညျမွနျမာနိုငျငံနှငျ့ထိုငျးနိုငျငံအတှကျအပွုသဘောသကျရောကျမှုမြားနှငျ့အကြိုးကြေးဇူးမြားရရှိလိမျ့မညျ။